Waxtarka Biyaha Ee Jidhka! - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Waxtarka Biyaha Ee Jidhka!
Waxtarka Biyaha Ee Jidhka!
Xogside – Maskaxda ayaa lagu qiyaasay in 80% ay ka kooban tahay biyo sidaas darteedna haddii qofku uu isticmaalo cabista biyaha badan waxay taasi dhiirigelinaysa shaqada maskaxda. Waxa kale oo ay biyaha badani ka caawinayaan kana hortgeyaan xanuunada masaxada ku dhaca ee qaliinka keena. Dhakaahtiirta cilmi baadhistaan sameeyay ayaa ku taliyay in ugu yaraan maalintii la cabo laba litir oo biyo ah .
Waxa kale oo maskaxda saamayn toos ah ku leh cuntada uu qofku qaato, kuwaasi oo hawlqabadka maskaxda caawinaya. Sidaas awgeed waxaad awood u leedahay doorashada cuntada saxda ee korin karta awoodda maskaxada, taasi oo si weyn u caawinaysa xusuusta maskaxda iyo hawlqabadkeeda.
Cunto dheelitiran ayaa ah ta lagu la taliyo dadka, waxase jira cuntooyin si gaar ah waxtar ugu leh shaqada maskaxada kuwaasi oo loo yaqaano cuntada maskaxada, sida Kaluunka gaar ahaan noocyada Salmon, Saradine, Tuna, Herring, Mackerel iyo Ansjos, dhamaan Khudaarta kala duwan.
Previous articleSebenka Iyo Nolosha Isu Eeg
Next articleXikmadaha hadalka